Fifidianana Etazonia: Mila Matanjaka Vao Tafita | mandimby maharo
Fifidianana Etazonia: Mila Matanjaka Vao Tafita	Posted on 4 November 2012 by Mandimby Maharo	Ny 06 Novambra izao no hifidy izay ho filoham-pireneny ny vahoaka amerikana. Hisafidy amin’ireo kandida roa, Mitt Romney avy amin’ny antoko repoblikana sy Barack Obama natolotry ny antoko demokraty ireo mpifidy mihoatra ny 100 tapitrisa. Fifidianana iarahan’ny fanjakana 50 izay mandrafitra ny Etazonia izy ity. Izay voafidy amin’izy mirahalahy ireo izany no hitondra an’I Etazonia ao anatin’ny 4 taona manaraka.
Fepetra afahana mirotsaka;–	Teratany Amerikana–	35 taona fara fahakeliny–	Efa nonina tany Etazonia 14 taona fara fahakeliny–	Ny filoha lefitra dia tsy maintsy mahafeno ireo fepetra ireo ankoatry ny tsy maha iray fanjakana niaviana azy amin’ny filoha.
Ny fifidianana filoham-pirenena amerikana dia fifidianana tsy mivantana, “scrutin indirect à un seul tour”. Maharitra taona iray io fifidianan io, ary be pitsopitsony sy maro ambaratonga maro. Ny fanovana natao ao amin’ilay 12th Amendment (1809) no nametraka ity fomba fifidianan ity, izay somary niataka kely aminizay voafaritry ny lalampanorenana nandanina ny filoha voalohany tamin’ny taona 1789. Taty aoriana dia samy nanova ny lalam-pifidianany ny fanjakana (State) tsirairay avy.
Fifidianana iray, fomba fifidianana samy hafa:Na dia fifidianana iarahan’ireo fanjakana 50 manao aza ity fifidianana ity dia samy manana ny fomba hanatanterahany izany izy ireo. Amin’ny maha fanjakana federaly azy manko dia samy manana ny fahaleovantenany amin’izay lalampifidianany ireo fanjakana ireo. Ao ny manao izany amin’ny fampiasana milina. Ao ny manatanteraka izany amin’ny ny fandrotsahana vato anaty vata mangarahara. Ary na ny biletam-pifidianana aza dia samy manana ny anontany izany ny tsirairay: ao ny manao bileta tokana, ao ny mampiasa bileta maromaro. Misy koa ny manao ireo fifidianana maromaro miaraka ka sady mifidy izay ho filoha izy ireo mpitondra any an-toerana.
Mialohan’ny taom-pifidianana dia maro ireo manao fanambara fa hirotsaka ho kandida. Manao fampielezankevitra any anatin’ny antokony izy ireny mba hanohana azy ho atolotra ho fidina. Manangona sonia isaky ny fanjakana iray izy ireo ary tsy maintsy manana mpanohana isaky ireo fanjakana 50 ireo vao afaka mirotsaka ho filoha. Antoko roa no matanjaka;Misy antoko maro toy ny any amin’ny tany rehetra any Etazonia. Tsy mba manana lalana mifehy ny antoko politika rahateo izy ka afaka manangana avokoa ny rehetra. Afaka mirotsaka amina’ny anaran’ny tenany koa nefa ny olona; Noho ity firenena ity fanjakana federaly nefa dia sarotra ho an’ny antoko iray ny hanana tanjaka ka hahazo ny toeran’ny filoha raha tsy mahenika ny Etazonia iray manontolo io antoko io.. Mila manana mpanohana isaky ny fanjakana koa noho izany ireo izay te hirotsaka vao hahavita ny taom-pifidianana izay lava. Vokatry ny tantara sy rafim-piarahamonina dia ny antoko Demokraty sy ny Repoblikana no hany manana tanjaka hahenika ny Etazonia ka afaka hanohana kandida ho filoha. Ankoatrizay ny halafosan’ny fanaovana fampielezankevitra
Manomboka ny volana janoary amin’ny taom-pifidianana io fampielezan-kevitra io. Mampivory ireo mpikambana ao aminy eo amin’ny fanjakana iray ny antoko iray, i Iowa no anaovany izany voalohany. Tsy voatery amin’ny toerana iray nefa io fivoriana io fa mety mitsitokotoko any amin’ny kaominina na fivondronana madinika any. Io ilay atsoina hoe Caucus. Rehafa izany dia miroso amin’ny fifidianana ambaratonga voalohany ny antoko, “election primaire” no iantsona azy. I New Hampshire no matetika miroso mialoha amin’io fifidianana io. Mitohy isak’ireo firenena 50 tsirairay avy ireo dingana roa ireo: mandeha ny Caucus dia miroso amin’ny Primaire ny antoko avy eo. Misy kosa nefa ireo fanjakanna nifanaiky fa hiaraka hampanao ny Primaire ny talata iray amin’ny volana febroary. Io dia nomena ny anarana hoe “Super-Tuesday”. Anisan’ny mampiova zavatra be io satria afahana mamaritra ireo izay kandida manana ny hery sy be mpanohana indrindra manerana an’i Etazonia. Misy koa nefa ny tsy manao ny Primaire fa ny Caucus ihany dia ampy ho azy hamaritany ny ho kandida ho fidina, Toy izay fanaon’ny antoko rehefa tonga any Alaska na i Dakota Avaratra. Mandritra io fifidianana voalohany tanterahin’ny antoko io koa dia manendry izay mpisolo tena azy any amin’ireny fanjakana ireny ny mpifidy. Ireo solotena ireo avy ao no mamonjy ny Convention Nationale.
Ity Convention Nationale ity no fotoan-dehibe anambaran’ny antoko tsirairay avy ny kandidany. Eo koa no anendrena izay ho arotsaka ho filoha lefitra. Eo koa no tena manomboka ny fampielezan-kevitra ifanindranan’ireo kandida voahosotry ny antoko ho tohanany., Efa nihintsana avokoa moa ireo antoko sy kandida madinika ka ny Repoblikana sy ny Demokraty matetika sisa tonga eto amin’ity dingana ity. Manazava ny tetikasany ato ny mpirotsaka ho fidina ary mampiseho ihany koa izay ho filoha lefiny rehefaho filoha izy.
Ny volana septambra ity fotoan-dehibe ity no atao satria fotoampialantsasatra io ka afaka ny rehetra<;
Ny fifidianana filoham-pirenena no mahasarika olona be indrindra noho ireo fifidianana isam-paritra sy isam-panjakana. Io dia noho ny fahasarotan’ny fisoratana anarana ao anaty lisim-pifidianana. Eo koa ny fivezuivezen’ny mponina ka tsy mahasarika azy ny fufidianana izay ho mpitondra ao antoerana fa ny filoha izay hitondra ny firenena manontolo no akaiky azy kokoa. Noho ny fivoaran’ny haitaom-pifandraisana dia mitombo ireo tanora voasarika amin’ny fifidianana. Na sarotra aza manko ny fomba fifidianana dia lasa toy ny fialamboly izany noho ny fahaizan’ireo kandida mampiasa ny teknolojia mandritra ny fampielezankevitra. Iarahana mahalala tokoa manko ny halehibiazan’ny fampielezan-kevitra any Etazonia. Ny kandida tsirairay dia manana ny mpiara miasa aminy mikarakara izany. Misy ireo kandida no manangona vola (1 + 2 ) hanaovana izany fifidianana izany avy amin’ireo kojakoja toy ny akanjo sy satroka. Misy koa ireo manana mpanohana toy ny vondron’olona na olo-malaza. Ny antoko mpanolotra koa dia efa manana teti-bola amin’izany. Tsy misy fetra ny vola laniana fa izay famatsina voararan’ny lalana ihany no tsy azo atao. Afaka mifidy ny famatsiam-bola ataon’ny fanjakana koa nefa raha toa ka tsy ampy vola ny kandida iray hanaovany fampielezankevitra.
Ny fampielezankevitra ho an’ny raona 2012 dia nahazoana vola toy izao ho an’ireo kanduda roa:Barack Obama: 937.2 tapitrisa dolara amerikana.Mitt Romney: 982.7 tapitsisa dolara amerikana.Maro koa ireo olo-malaza nanambara fa manohana kandida iray.Barack Abama: George Clooney, Jessica alba, Bill Clinton, Eva longoria, Sarah Jassika Parker, Olivia Wilde, Beyonce…Mitt Romney; Cindy Crowford, Chuck Norris, Jenna Jemeson, Clint Eastwood, Charlene Wells Hawkes…
Ankoatr’ireo mpiasa ao anatin’ny komity mpitantana ny fampielezan-kevitra dia maro be ireo mpilatsaka an-tsitrapo manao fampielezan-kevitry ny kandika tohanany. Nitety trano na miantso an-tariby ireo mpifidy izy ireo mba hitondra fanazavana momba ny tetikasan’ny kandidany. Misy ireo mpianatra eny amin’ny oniversite no manantona ny tanora namany. Ao ny mpikambana amin’ny fikambanana miara mientana manao valan-dresaka na famoriana olona any amin’ny toeram-pilanonana. Ao ireo mikarakara fampisehoana na sakafo iraisana mba hanangonana vola sy hampielezana hevitra ho an’ny kandidany.
Fifidianana ataon’ny vahoaka.
Ny lalampanorenana amerikana dia mamaritra fa ny vahoaka dia mifidy ny filoham-pireneny ny talata voalohany aorian’ny alatsinainay voaloany amin’ny volana novambra. Malalaka amin’ny safidiny ny mpifidy ary latsabato miafina no atao. Mifidy mivantana izay fioha maharesy lahatra azy ny vahoaka .nefa koa, io fifidianana ataon’ny mponina io dia afahana mamaritra ireo izay hisolo tena azy ao anatin’ilay College electoral. Photo Express.frTsy mpamadika palitao.Ny vahoaka amerikana dia tsy mba tia mivadibadika antoko. Ny fandresena azon’ny kandida natolotry ny Repoblikana na Demokraty iray ao amin’ny fanjakana iray dia efa fantatra mialoha matetika. Misy manko nyfanjakana efa fantatra fa mpifidy REpoblikana hatrizay, ary misy ireo Demokraty hatry ny ela. Io rirnan’ny olona io tombana io koa dia vokatry ny fanadihadina ny toetry ny fiaraha-monina ao amin’ireny fanjakana ireny: ny fiavian’ny mponina, ny marimpahaizan’ny mpoinina, ny salan’ny tsy fananana asa, ny karama raisin’ny tokatrano isantaona, ny isan’ny zaza ateraka, ny tahan’ny tanora ….Noho io efa fahafantaranba io koa no mahatonga ny kandida tsy mandany vola sy fotoana any amin’ny faritra tsy mpanohana ny antokony.Misy kosa ne fa ireo fanjakana izay tena miovaova be ka mila anaovan,a ezaka manokana mihintsy ny fanaovana fampielezan-kevitra any aminy.
Mpifidy lehibe sy ny safidim-bahoaka:
Ankoatry ny fifidianana ataon’ny vahoaka mivantana dia mampiavaka ny fifdianana ny filoha sy filoha lefitra any Etazonia koa ny fifidianana ataon’ireo mpifidy lehibe. Ny fivondronan’izy ireo no manome ny atao hoe “College electorale”.
Ny college electoraleMiisa 538 ny mpifidy lehibe mivondrona ao amin’ity college electorale ity. Atolotry ny antoko politika izy ireo ka fidin’ny vahoaka isaky ny fanjakana indray avy eo. Mitovy isa amin’ireo solombavambahoaka (Repesentants) sy loholona (Senators) ananany no isan’ny mpifidy lehibe isaky ny fanjakana. Izany hoe: mifanaraka amin’ny isan’ny mponina no isan’ny solombavambahoaka, toy izay koa ny isan’ny mpifidy lehibe. Miampy senatera roa isaky ny fanjakana, noho izany dia miampy roa koa ny mpifidy lehibe; noho izany, fara fahakeliny dia manana mpifidy lehibe 3 ny fanjakana iray. Ny 23th Amendment nefa dia nametra fa ny distrikan’i Colombia, misy an’I Washington renivohitra dia manana loholona telo, satria ankoatry ny maha distrika azy dia heverina ho fanjakana koa izy. Tsy mihoatra io isa 538 io kosa nefa ny isan’ireo mpifidy lehibe. Ny fanisana mponina atao isaky ny 10 taona no amaritana ny isan’ny seza ho an’ny fanjakana tsirairay avy. Izay mahazo vato 270 amin’ny fifidianana ataon’ireo mpifidy lehibe ireo no mahazo ny fandresena.
Ny kandida tsirairay avy dia samy manana vondrona mpifidy lehibe avy any anivon’ireo fanjakana 50. Ny ankamaroan’ny fanjakana dia namaritra fa izay mandresy amin’ireo filoha dia mahazo ny toerana rehetra ao amin’ny College. Ny fanjakan’i Maine sy Nebraska ihany no namaritra fa ho zaraina arakaraky ny isambato azo ny toerana. Rehefa avy mifidy vahoaka, ka fantatra ny filoha sy ireo mpifidy lehibe lany isaky ny fanjakana, ary fantara koa ireo kandida resy , dia alefa maiaraka any amin’ny kaongresy ny anaran’izy ireo.
Ny fivoriana hanaovan’ireo mpifidy lehibe ireo ny fifidianana izay ho filoha sy fioha lefitra dia atao isaky ny renivohitry fanjakana nahalany azy ihany. Ny 17 desambra ho avy izao no ho atao io fifidianana tanterahin’ny mpifidy lehibe io. Vato roa samy hafa no ampiasaina amin’izany, iray ho an’ny filoha, iray ho an’ny lefitra. Alefa any amin’ny kaongresy koa ny vokatry ny fifdianana amin’izany. Ny 6 janoary kosa vao ataon’ireo ao amin’ny kaongresy (solombavambahoaka sy senatera) ny fanisana ny vato rehetra manerana ny Etazonia. Raha sanatria kosa nefa tsy misy mahazo ny antsasamanila amin’io fifdianana io ireo kandida dia ireo ao amin’ny Chambre des representants no manendry izay filoha. Ka izay kandida 3 nahazo vato be indrindra tamin’ny fifidianana nataon’ireo mpifidy lehibe no isafidianan’ny solombavam-bahoaka. Izay be vato na dia tsy antsasamanila amin’io fifidianana ataon’ny solotena iray isaky ny fanjakana io no lasa filoha. Ny filoha lefitra kosa dia ny loholona (Senat) no mifidy azy raha sanatria tsy nisy ny fandresena tany amin’ny mpifidy lehibe.
Ambaran’ny filohan’ny loholona ampahibemaso avy izay ho filohampirenena. Manao fianinana kosa io filoha io ny 20 janoary ny taona manaraka ny taom-pifidianana.
Tags: Etazonia, fifidianana, politique, USACategories: politique